काठमाण्डौ। गाडी चलाउँदा दिमाग सधैँ सक्रिय राख्नुपर्छ। दिमाग सक्रिय रह्यो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ गाडी चलाउँदाचलाउँदै ब्रेक फेल हुन्छ। यस्तो स्थिति निकै दुलर्भ हुन्छ। तर यदि चालकको दिमाग शान्त र सक्रिय भने ब्रेक फेलकै कारण हुने दुर्घटनाबाट जोगिन सक्छ। किनकि ब्रेक फेल भएपछि चालक नर्भस हुँदा प्रायः दुर्घटना...
बीएमडब्ल्यूले लन्च गर्यो पावरफुल कार, केवल ३.८ सेकेन्डमै लिन्छ १००केएमपीएचको रफ्तार
काठमाण्डौ । जर्मनीको गाडी निर्माता कम्पनी बीएमडब्ल्यूले भारतमा आफ्नो पावरफुल एसयूभी एक्स ५ एम कम्पिटिसन लन्च गरेको छ। यो कारको मूल्य भारु १.९४ करोड तोकिएको छ। बीएमडब्ल्यू एक्स ५ एम एउटा स्पोर्ट्स एक्टिभिटी भेइकल (एसयूभी) हो। यसलाई भारतमा सीबीयू मार्गका माध्यमबाट ल्याइएको हो। यो कारले भारतमा ओडी आरएसक्यू ८ र लेम्बोर्गिनी उरुसजस्ता...
थाइल्यान्डमा होन्डा सिटी ह्याचब्याक लन्च, यस्तो छ लुक
काठमाण्डौ । होन्डा कम्पनीले होन्डा सिटी ह्याचब्याक पेस गरेको छ। यो कार हाल थाइल्यान्डमा पेस गरिएको र त्यहीँबाट यो कारको बिक्री सुरु गरिनेछ। होन्डाले सिटीको ह्याचब्याक भर्जन निकै लामो समयपछि पेस गरेको हो। होन्डा सिटी ह्याचब्याक सेडानजस्तै प्लेटफर्ममा आधारित छ । कारको लगभग सबै बडी प्यानल्स सेडानबाटै लिइएको छ । कारमा स्पोर्टी लुकका...
काठमाण्डौ । दक्षिण कोरियाली अटो निर्माता कियाको बहुप्रतीक्षित सब–कम्प्याक्ट एसयुभी ‘सोनेट’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । नेपालका लागि कियाको एकल अधिकृत बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिले यो एसयुभी नेपाल भित्र्याएको हो । कम्पनीले केहीअघि सोनेटको प्रि–बुकिङ खुला गरेकोमा सब–कम्प्याक्ट एसयुभी पारखीबाट...
आउँदैछ नयाँ ‘महिन्द्रा एक्सयूभी ५००’ कार, यस्ता छन् फिचरहरु
काठमाण्डौ । महिन्द्रा एक्सयूभी ५०० को न्यु जेनेरेसन मोडल कम्पनीले आउँदो वर्ष लन्च गर्ने भएको छ। यो कारसँगै कम्पनीले आफ्नो पपुलर एसयूभी २०२१ महिन्द्रा स्कोरपियो पनि लन्च गर्नेछ। यी दुवै कार आउँदो वर्षका लागि कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो लन्च हुन सक्छ। नयाँ महिन्द्रा एक्सयूभी ५०० टेस्टिङका क्रममा सार्वजनिक भएको थियो। यस क्रममा यसपालि यो...
आउँदैछ धेरै लम्बाइको किआ सोनेट कार, यस्ता छन् अन्य विशेषता
काठमाण्डौ । किआ मोटर्सले हालै भारतमा ‘किआ सोनेट’ कार लन्च गर्यो। भारतमा यो कारको कम्प्याक्ट एसयूभीका रुपमा लन्च गरिएको थियो। यो कार भारतमै निर्माण गरिन्छ। किआको यो मेड इन इन्डिया कारको उत्पादक कम्पनीको अनन्तपुर प्लान्टमा गरिन्छ। अब यो कार अलि लामो भर्जनमा लन्च गर्ने तयारी भइरहेको छ। किओ मोटर्स मलेसियामा किआ सोनेटको जुन भर्जन...
फोटोनको १५ सिटे कमर्सियल गाडी चाँडै नेपाल भित्रिने, अत्याधुनिक टेक्नोलोजी र आकर्षक लुक्स
काठमाण्डौ । फोटोन मोटर्सका लागि नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता एम.ए.डब्ल्यू भृद्धि कमर्सियल भेइकल्स प्रालिले नयाँ गाडी भ्यू सीटू फिप्टिन सिटर (View C2 15 Seater) भित्र्याउने भएको छ । फोटनले विश्वभर विश्वस्तरीय कमर्सियल गाडीहरु बिक्री गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा पनि बिभिन्न मोडलका फोटन गाडीहरुको बिक्री हुने क्रम बढिरहेको...
केटीएम ल्याउँदैछ यो शानदार एडभेन्चर बाइक, यस्ता छन् विशेषताहरु
काठमाण्डौ । बाइका सौखिनहरुका लागि केटीएम यही महिना शानदार बाइक ‘केटीएम २५९ एडभेन्चर’ लन्च गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। समाचार सूत्रहरुका अनुसार यो बाइक अबको २–३ हप्ताभित्र भारतमा लन्च हुनेछ। हालै यो बाइक भारतमा टेस्ट राइडका क्रममा देखिएको थियो। अफ रोडिङ र एडभेन्चर यो बाइकमा २४८ सीसी सिंगल सिलिन्डर इन्जिन हुनेछ। यो बाइकको टक्कर रोयल...
तयार भयो उड्ने कार, ३ मिनेटमै बन्छ प्लेन, यस्ता छन् अन्य विशेषताहरु
काठमाण्डौ। उड्ने कारको सपना अबै छिटै साचो हुँदैछ। हालै युरोप महाद्वीपस्थित स्लोभाकियामा एउटा उड्ने स्पोर्टस कार (एअर कार) को सफल परीक्षण गरिएको छ। सडकमा गुड्दागुड्दै यो कारले केवल ३ मिनेटमै प्लेनको रुप लिन्छ। परीक्षणका क्रममा यो कार १ हजार ५०० फिटको उचाइमा सफलतापूर्वक उडेको थियो। यो परीक्षण उडानको भिडियो सार्वजनिक गरिएको...
मारुती सुजुकीको धमाकेदार तयारी, लन्च गर्नेछ हरेक ६ महिनामा नयाँ एसयूभी
काठमाण्डौ । एसयूभी सेगमेन्टको लगातार बढिरहेको मागका बीच मारुती सुजुकीले हरेक ६ महिनामा एउटा नयाँ एसयूभी कार लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले यसरी लन्च गर्ने हरेक गाडीको प्राइस सेगमेन्ट पनि फरक–फरक हुनेछ। बिजनेस स्ट्यान्डर्डको रिपोर्टअनुसार कम्पनीले यसरी ६–६ महिनामा नयाँ एसयूभी कार लन्च गर्ने योजनाको सुरुआत सन् २०२१ को...
रनर मोटसाइकलको खरिदमा रु. ५१ हजारसम्मको भारी छुट
काठमाण्डौ । बंगलादेशको प्रतिष्ठित ब्राण्ड रनर मोटरसाईकलले दशैं तिहारलाई लक्षित गरी भारी नगद छुट सहितको अफर ल्याएको छ । रनर मोटरसाईकलको नेपालका लागी आधिकारिक विक्रेता रमण मोटर्सले रनर मोटरसाईकको खरिदमा ५१ हजार सम्मको भारी छुट दिने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अफर रहेको दाबी गरेको छ । साथै कम्पनीले मोटरसाईकल...
अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको जाँचपास अब भीएफटीसीबाट
काठमाण्डौ । विगतमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा अब अन्तरप्रदेश चल्ने सवरीसाधनको जाँच पास र रुट इजाजतको काम भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भीएफटीसी) बाट गरिने भएको छ। कार्यालय हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ भने केन्द्र संघीय सरकारअन्तर्गत छ। सरकारले प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय हस्तान्तरण गरेको झण्डै दुई...
टीभीएस अपाचेको रेकर्डतोड बिक्री, विश्वभर ४० लाख युनिट बिक्यो
काठमाण्डौ । टीभीएस मोटर कम्पनीको प्रिमियम मोटरसाइकल टीभीएस अपाचे रेकर्डतोड बिक्री भएको छ। यो मोटरसाइकल विश्वभर ४० लाख युनिट बिक्री भएको हो। जुन मोटरसाइकल बिक्रीको हिसाबले हालसम्मकै उच्च रहेको कम्पनीको दाबी छ। टीभीएसको अपाचे सिरिजअनुसार हालसम्म आरटीआर १६०, अपाचे आरटीआर १६० ४भी, अपाचे आरटीएआर १८०, टीभीएस अपाचे आरटीआर २०० ४भी र...
“ESCORTS दशैं तिहार उपहार भरमार अफर”
काठमाण्डौ । नेपालका लागि ESCORTS Construction Equipment को आधिकारिक विक्रेता आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रा. लि. ले ESCORTS मेसिन खरिदका लागि दशै तिहारमा विशेष अफर ल्याएको छ । सो अफर अन्र्तगत कुनै पनि ESCORTS मेसिनको खरिदमा अब ग्राहकले यासुदा ब्राण्डको होम अप्ल्यान्स प्याकेज पाउनुको साथै थप डिस्काउन्ट पनि पाउनेछन् । आइएमई अटोमोटिभ्स् ले यो अफर दशैं तिहार र छठ पर्व लाई...
अटो वर्कशपहरु सुरक्षितसाथ सञ्चालन गर्न नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघ र नेपाल ल्युव आयल लि.को सहयोग
काठमाण्डौ । अटो वर्कशपहरु सुरक्षित बनाई कार्य सञ्चालनमा सहजता होस भन्नका निमित्त नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघ र नेपाल ल्युव आयल लि. गल्फ लुब्रिकेण्टले नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघलाई सहयोग गरेको छ । कोभिड १९ यसको असरवाट अटो वर्कपश पनि अछुतो रहने कुरै भएन उक्त अवस्था लाई मध्यनजर गर्दै केही हदसम्म भएपनि अटो वर्कशपहरु...